Zvapupu zvaJehovha—Makore Zana | Bhuku Regore ra2016
Mapilgrim aishanda nesimba ayo aishamwaridzana naHama Russell
GORE ra1916 richangotanga, Hondo Yenyika 1 yakanga yava negore ichipisa. Pakafa vanhu vakawanda chaizvo.
Nharireyomurindi yaJanuary 1, 1916, yakati: “Hondo huru yeEurope yakaita kuti vamwe vanhu vafarire zvechitendero uye vanetseke pamusoro peramangwana.” Nyaya yacho yakaenderera mberi ichiti: “Ngatirambei tichikoshesa ropafadzo dzedu nemikana yatiinayo, kuitira kuti tisatya asi tishingaire pakushumira Mwari nekuzivisa Shoko rake.”
Rugwaro rwegore rwa1916 rwakakurudzira hama kuti dzirambe ‘dzakasimba pakutenda,’ maererano naVaRoma 4:20 muKing James Version. Ndizvo zvakaitwa neVadzidzi veBhaibheri vakawanda, uye vakakomborerwa chaizvo naJehovha.
Mapilgrim Akakurudzira Hama
Vamiririri veWatch Tower Society avo vaizivikanwa semapilgrim, vakafamba mutaundi rimwe nerimwe vachikurudzira Vadzidzi veBhaibheri uye vachivapa mirayiridzo. Muna 1916, mapilgrim anopfuura 69 akafamba makiromita anopfuura 800 000 achiita basa iroro.
Achipa hurukuro pagungano rakaitwa muNorfolk, kuVirginia, mumwe mupilgrim ainzi Walter Thorn, akaenzanisa hondo iri kurwiwa nevaKristu neHondo Yenyika I, achiti: “Zvinofungidzirwa kuti kune mamiriyoni ari pakati pe20 kusvika ku30 evarume vari muhondo. . . . Asi kune rimwe boka [remasoja] risingazivikanwi nenyika. Boka racho nderemasoja aShe, uye kungofanana neuto raGidhiyoni, boka iri riri kurwa, asi kwete nezvombo chaizvo. Riri kurwira chokwadi nekururama, uye riri kurwa hondo yakanaka yekutenda.”
Kushumira Pasinei Nematambudziko Emunguva Yehondo
KuFrance, varume vanopfuura miriyoni vakakuvadzwa kana kuti vakaurayiwa muhondo yainzi First Battle of the Somme, iyo yakarwiwa gore ra1916 rava kunopera. Kune dzimwe nzvimbo muFrance, hama dzakashanda nesimba pakutsigira makirasi kana kuti ungano, kunyange pazvainge zvakaoma munguva iyoyo yehondo. Nharireyomurindi yaJanuary 15, 1916, yaiva netsamba yemumwe Mudzidzi weBhaibheri ainzi Joseph Lefèvre, uyo akanga atiza muguta raakakurira reDenain, kuFrance, masoja eGermany paakapinda muguta racho nechisimba muna 1914. Akananga kumaodzanyemba kuParis achibva atanga kuwadzana nekirasi yeVadzidzi veBhaibheri, iyo yaingova imwe chete muguta racho. Pasinei nekuti aiva neutano husina kunaka, akabva atotanga kuitisa misangano yese.
Nekufamba kwenguva, Théophile Lequime uyo ainge atizawo kuDenain akauyawo kuzobatana naJoseph. Hama Lequime vakambotanga vaenda kuAuchel, muFrance, uye vari ikoko vakatanga kushandura nyaya dzemuNharireyomurindi vachidzitumira kuhama dzaiva munzvimbo dzakanga dzisati dzapambwa muFrance. Vakazomanikidzwa kubuda muAuchel nemasoja ayo akanga ava kuvanyumwira. Pakauya Hama Lequime kuParis, Hama Lefèvre vakanyatsoona kuti minyengetero yavo yakanga yapindurwa.
Jehovha akakomborera basa ravaiita muParis. Hama Lefèvre vakati: “Iye zvino tava nekirasi yevanhu vanenge 45 . . . Vanhu vakati kuti vava kuziva zvakanakira kuzvitsaurira uye kuti iropafadzo chaiyo, uye vari kufambira mberi chaizvo pakunamata. Vhiki rega rega, anenge munhu wese zvake ari kupinda musangano weumboo (pamusangano uyu vanhu vaitaura zvakaitika mubasa rokuparidza).”
Vakaramba Vasina Kwavanotsigira
Hondo zvayairamba ichienderera mberi, hama dzedu dzakawanda dzakanangana nemuedzo wekuti dzipinde muchiuto. KuGreat Britain kwakagadzwa Mutemo Webasa Rechiuto, uyo wakazopedzisira wava kushandiswa kumanikidza varume vese vane makore ari pakati pe18 ne40 kuti vapinde muchiuto. Asi Vadzidzi veBhaibheri vakawanda vakaramba kupinda muchiuto.
Semuenzaniso, Nharireyomurindi yaApril 15, 1916, yakabudisa tsamba yaibva kuna Hama W. O. Warden vekuScotland. Vakataura kuti: “Mumwe mwanakomana wangu ava nemakore 19. Kusvika pari zvino, apa uchapupu hwakanaka nezvaShe nekuramba kupinda muchiuto, uye kana izvi zvichireva kuti achapfurwa nekuti ari kuramba, ndinovimba kuti Nyasha Dzedenga dzichamubatsira kuti arambe akabatisisa chokwadi uye kururama.”
James Frederick Scott, uyo aiva mucolporteur wechidiki wekuEdinburgh, Scotland, akapinzwa mudare nekuti haana kuenda paakashevedzwa kuti anopinda muchiuto. Asi pashure pekunge dare ranzwa umboo hwese, rakati Hama Scott “vakanga vari mumwe wevaya vaibvumirwa neMutemo wacho kuti varambe” uye vakawanikwa vasina mhosva.
Kunyange zvakadaro, vakawanda havana kubvumirwa kuramba. Pakazosvika September, pahama 264 dzakanga dzanyorera dzichikumbira kuti dzisapinda muchiuto, 23 dzacho dzakapiwa mabasa asiri ekubata zvombo. Pane vakanga vasara, vamwe vavo “vakarangwa nenzira dzakasiyana-siyana” uye vese zvavo vakanzi vaifanira kuita “mabasa anokosha munyika akadai sekugadzira migwagwa, kuchera matombo ekuvakisa, nezvimwewo,” yakadaro Nharireyomurindi yaOctober 15, 1916. Hama shanu chete ndidzo dzakabvumirwa kuramba kupinda muchiuto.
Charles Taze Russell Anofa
Musi wa16 October, 1916, Charles Taze Russell uyo aitungamirira Vadzidzi veBhaibheri panguva iyoyo, akatanga rwendo rwekunoparidza kumadokero kweUnited States. Haana kuzombodzoka kumba. Masikati emusi weChipiri, 31 October, Hama Russell vakafira muchitima muguta rePampa kuTexas, vava nemakore 64.
Hama dzakawanda dzaifunga kuti hapana aizokwanisa kutsiva Hama Russell. Wiri yavo, iyo yakabudiswa muNharireyomurindi yaDecember 1, 1916, yakataura zvido zvavo pamusoro pebasa ravakanga vatungamirira kwenguva yakareba kudaro. Asi pakaramba paine mubvunzo wekuti: Ndiani aizotora nzvimbo yavo mubasa iri?
Mubvunzo iwoyo waizokurukurwa pamusangano wepagore weWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, waizoitwa gore ra1917 richangotanga. Vanhu vaiva pamusangano wacho vakavhota uye vese vakabvumirana. Asi zvaizobuda pachena mumwedzi mishoma yaitevera kuti zvavakanga vawirirana zvaingova zvenguva pfupi, uye miedzo yakaoma yakanga yakavamirira.